सावधान ! झुक्किएर पनि गुगलमा यी कुरा सर्च नगर्नुहोस्, यस्तो छ कारण « Lokpath
२२ असार २०७६, आईतवार १४:१३
सावधान ! झुक्किएर पनि गुगलमा यी कुरा सर्च नगर्नुहोस्, यस्तो छ कारण
प्रकाशित मिति : २२ असार २०७६, आईतवार १४:१३
काठमाडौं । आजको युग प्रविधिको युग । हरेक मानिसहरु सबै भन्दा बढी मोवाइल, फोन, ल्यापटपमा भुल्ने गर्छन् । अहिले इन्टरनेटमा भिडियो हेर्ने र सर्च गर्नेको भिड लाग्ने गरेको छ । विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेर पनि दुनियाँको बारेमा जान्न सकिन्छ, कहा के भइरहेको छ सहजै थाहा पाउन सकिन्छ ।
जबदेखि गुगल असिस्टेन्टको सेवा सुरु भयो मानिसहरु लेख्नुका साथै बोलेर पनि सर्च गर्न थालेका छन् । हामि सोच्छौं हरेक कुरा गुगलमा भेट्टाइन्छ भने खोज्दैमा के हुन्छ र ? तर त्यसो होइन । गुगलमा हरेक कुनै कुरा खोज्दा एकदम विचार पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । यदि कुनै कुरामा विचार पुर्याउन सकिएन भने ठुलो हानि बेहोर्नु पर्ने हुन्छ ।
यो छिटो दौडमा हामी गुगलमा केही चीजहरू खोज्दै छौं जुन सर्च गर्दै अनुसन्धान एजेन्सीहरू तपाई माथि मनिटर गर्न सुरु गर्छन्। एक दुई पटक बेवस्ता गर्न सक्छ तर पटक पटक सर्च गर्नाले तपाईलाई प्रहरीले उठाएर लैजानसक्छ । यस्ता छन् सर्च गर्न नमिल्ने कुरा
१. चाइल्ड पोर्न:- पोर्नलाई लिएर पछिल्लो समय निकै बहस भएको छ । भारत र नेपालमा चाइल्ड पोर्नसँग सम्बन्धित जानकारी रख्न र बढावा दिन गैरकानूनी हो । यदी तपाई गल्तीले चाइल्ड पोर्न सर्च गर्नुहुन्छ भने पनि सावधान हुनुहोस् ।
२. औषधि किन्न:- गुगल प्ले स्टोरमा धेरै यस्ता मोबाइल एप्प छन् जसबाट तपाई औषधि किन्न सक्नुहुनेछ । तर त्यसको लागि तपाईले डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन देखाउन अनिवार्य छ । यदि तपाई बिना कुनै डाक्टरको स्विकृत औषधि किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाई समस्यामा पर्न सक्नुहुनेछ । अनुसन्धान एजेन्सीहरू ती मानिसहरु माथि पनि मुल्यांकन गर्छन् जसले गुगलबाट ओषधि किन्छन् ।
३. कसैको जानकारी गुगलमा खोज्नु:- यस्तो कुनै जानकारी गुगलमा सर्च नगर्नुहोस् जसले अरुको आन्तरिक बिषयमा संकेत गर्दछ । जस्तै ( लोकेशन, अफिस र घरको बारे मा सर्च नगर्नुहोस् । उदाहरणको लागि तपाई गाँउको लोकेशन त सर्च गर्न सक्नुहुन्छ तर प्रत्क्ष एड्रेस हालेर गुगलमा सर्च गर्नु कम चुनौतीको बिषय हुनेछैन ।
४. बम बनाउने तरीका:- चलचित्र ग्याङ अफ वास्यपुरमा कसरी काटि, खाली डिब्बा र डोरिको माध्यमबाट बम बनाउन सकिन्छ भनेर देखाइएको थियो । तब धेरै मानिसहरुले ठटै ठटामा बम बनाउने तरीकाबारे सर्च गर्न सुरु गरे । जुन वेबसाइट्, ब्लग वा यूट्यूब च्यानलमा बम बनाउने तरिकाको बिषयमा बताइन्छ त्यहाँ अनुसन्धान एजेन्सीहरू तपाई माथि मनिटर गरि रहेका हुन्छन् । यस्तोमा तपाईले पटक पटक सर्च गरे अफ्ट्यारोमा पर्नुहुनेछ । एजेन्सीको सहयोगमा